सर्पले आत्महत्या गरेको देख्नु भएको छ ? यसरी आफैले आफ्नो शरिर निलेर.. [भिडियोसहित]::आर एम खबर
सर्पले आत्महत्या गरेको देख्नु भएको छ ? यसरी आफैले आफ्नो शरिर निलेर.. [भिडियोसहित]
एजेन्सी । कहिलेकाही अत्यन्तै रोचक र अचम्मका दृष्य देख्न पुगिन्छ । अहिले त प्रविधिको समय ती दृष्यलाई तत्कालै क्यामेरामा कैद गरेर विश्वभरी देखाउन सकिन्छ । हालै मात्र अस्ट्रेलियाको केर्न्समा बस्ने म्याट हेगनले एउटा यस्तो भिडियो पोष्ट गरेर सबैलाई चकित बनाएका छन । जसमा उनले यो बताएका छन कि कसरी उनले एक बिशालु सर्पले आफै आत्माहत्या गर्दछ ।
आफ्नो जिऊ आफै निलेर सर्पले आत्माहत्या गर्ने गरेको उक्त भिडियोमा देख्न पाइन्छ । उनले यस दृष्यलाइ आफ्नो क्यामरामा कैद गरे । त्यसको केही समयपछिनै उक्त सर्पको मृत्यु भएको थियो । अझ भनौं उक्त सर्पले आत्महत्या गरेको छ । हेगन पेशाले एक स्नेक क्याचर हुन र उनले बताए अनुसार उक्त सर्पले आत्महत्या गरेको हो ।
उक्त सर्पले आफुले आफ्नै शरिर टोकेर मुखमा भएको बिष शरिरमा फैलन दियो । जसका कारण उसको मृत्यु भएको छ । यस्तो प्रमाण भेटिएको छ, तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन ।केही महिना पहिले मात्र यस्तै किसिमको भिडियो प्रकाशमा आएको थियो ।अहिलेको उक्त भिडियो भिडियो शेयरिङ साइटमा पोष्ट भएपछि त्यसलाइ करिब १ लाख १३ हजार भन्दा धेरै जना मानिसहरूले हेरिसकेका छन । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । आफुले पढिसकेपछि सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।